Inani lemininingwane ezweni lanamuhla likhula njalo, kodwa izindlela zokubhekana nazo zihlala zifanayo futhi sezivele zingasebenzi. Okukufanele ukusetshenziselwa okhokho bethu, abantu banamuhla angeke bakwazi ukubhekana nemibandela etholakalayo kanye nokuqina kolwazi lokugeleza.
Ukusetshenziswa kwemidwebo, izinhlu, amatafula nemibhalo ihlukaniswa ukushiyeka okuthile, nakuba ihlolwe yisikhathi. Okokuqala, uma inani lemininingwane likhulu, bese uqopha, khumbula, bese uveza futhi kuba nzima. Okwesibili, inqubo yokukhomba imibono eyinhloko inzima. Okwesithathu, isikhathi sisetshenziswe kule nkinga ngokungahambisani. Hhayi, okwesine, izindlela ezethuliwe zikhawulela ukusetshenziswa kwendlela yokudala kanye nokwakhiwa kwemibono emisha ekuxazululeni inkinga. Ngakho-ke, umhlaba wesayensi wanamuhla ukhuluma ngendlela enjengemephu engqondweni. Izibonelo nezigaba zokwakhiwa kwayo zizocatshangelwa ngezansi.
Indlela entsha yokwazisa ulwazi
Indlela entsha yokucubungula nokwazisa ulwazi yindlela yamabalazwe engqondo, owasungulwa ngu-Tony Bussen. Usosayensi uthi isimo sengxaki yizinqubo ezenzeka ebuchosheni bomuntu. Ukusebenza okungenangqondo, inkulumo, izibalo, ukumelela okulinganayo kwamaqiniso kusebenza endaweni engakwesokunxele yobuchopho. Kodwa i-hemisphere efanele ibhekene nokuqondisa emkhathini, ukuqonda, imisebenzi ehlukahlukene ye-abstract.
UTony Buzan uthi ukushintshwa kwezindlela zendabuko ngokuphumelelayo kuyimephu yengqondo. Izibonelo zalendlela zibonisa ukuthi ulwazi lubhaliwe, ngenxa yomsebenzi ovamile wezinhlangothi ezimbili zobuchopho nokucabanga okubukwayo.
Yiziphi izinzuzo zendlela entsha yokucubungula ulwazi?
Impendulo yalo mbuzo ilula futhi manje izoboniswa. Inzuzo yokuqala yale ndlela yukuthi ukurekhodwa kolwazi kuyashesha, kulula futhi hhayi njengokukhanya. Inzuzo yesibili - uma ufunda ikhadi, uzoba nokuxhumana okuhleliwe nokuqondakalayo phambi kwamehlo akho. Inzuzo yesithathu iyinzuzo yendlela enjengamabalazwe engqondo. Izinhlelo zakha izinqubo zokucabanga, okungukuthi inkumbulo, ukucabanga nokucabangela. Inzuzo yesine yukuthi lapho udala umdwebo umuntu usebenzisa amandla akhe okudala kanye nezinsiza zombili izizinda zobuchopho. Inzuzo yesihlanu ukuthi ulwazi lukhunjulwa cishe ngaso leso sikhathi futhi ngezinga eliphezulu lekhwalithi. Inzuzo yesithupha ukuthi kulula ukufunda indlela enjengemephu yengqondo. Ungayibhala kanjani? Imiyalo elula izokusiza.
Izimo zokusebenzisa indlela kaTony Buzen
Kunezindawo eziningana lapho ukusebenza kahle kokusebenzisa indlela efana nebalazwe yengqondo kubonakala. Izibonelo zizochazwa ngezansi.
Khulisa izinga lobuciko. Indlela esetshenzisiwe isetshenziselwa kabanzi ekuthuthukiseni ubuciko futhi ezimweni zokucabangisisa. Akuhlinzeki nje kuphela ukuthi kungenzeka ukukhiqiza imibono emisha, kodwa futhi ukuklama kwabo ngesakhiwo esicacile nesisemvelo.
Ukwaziswa ukuphathwa kwenkampani. Ukwakhiwa kwamabalazwe engqondo kusiza ukuhlela ukugeleza okukhulu kolwazi kwisakhiwo somuthi okuqinisekisa ukusabalalisa okusheshayo nokusebenza kahle kwedatha ezindaweni eziningi eziphakeme eziphakeme, kuye ngokubaluleka nemigomo yomuntu ngamunye.
Amandla okuhlela. Ngokuvamile indlela kaTony Buzan isetshenziswa ekuphatheni isikhathi. Futhi, ukuhlela izinsiza, imisebenzi, isikhathi sesikhathi sizobe lula uma umuntu enza lokhu usebenzisa le ndlela.
Ukumelwa okubonakalayo. Imephu yengqondo yisibonelo esihle ukuze abantu bakwazi ukubona ngokucacile nokucubungula imininingwane ekuxhumaneni kwayo okuhlukahlukene.
Inqubo yokufunda, imephu yengqondo iyasetshenziswa futhi. Izibonelo ezichazwe ngenhla zichaza ngokugcwele izinzuzo nezinzuzo zokusebenzisa le ndlela.
I-block elandelayo yolwazi esethulisiwe izotshela abafundi ukuthi basebenzise kanjani le ndlela.
Ikhadi le-mentally: ungayenza kanjani?
Akunakusho ukuthi ukusetshenziswa kwalolu hlelo olusha kulula, ngoba kuzodinga ukuthi umuntu asebenze, kodwa ukusebenza kwalo mkhono kuzokhokha izindleko zemithombo. Kukhona izigaba eziningana nama-nuances okumelwe alandelwe ukudala iphethini efanayo.
Izigaba ezintathu zokuqala - ukulungisa imephu yengqondo
Isigaba sokuqala yisigaba sokuqala. Kubizwa nangokuthi umbuso wenhlangano yamahhala noma ubuchopho. Isibonelo, unayo iphrojekthi. Ukuthatha ucezu lwephepha, bhala phansi yonke imicabango nemibono efika engqondweni, ngisho nabangenangqondo kakhulu. Kule nqubo, ayikho indawo yokugxekwa nokulinganiselwa.
Isigaba sesibili empeleni kudalwa imephu yengqondo. Ungathatha amapensela ombala bese ubhala isihloko esiyinhloko phakathi nendawo, okwenza amagatsha abhale phansi imibono ehlobene nomgomo oyinhloko futhi akhiqizwe ngesikhathi sokucabangisisa. Imibono eyisisekelo nayo ingangena emibhalweni eminingi ephansi.
Isigaba sesithathu ukulungiswa komdwebo. Kufanele uhlehlisele ikhadi okungenani amahora angu-2, futhi okungcono kunabo bonke - izinsuku ezingu-2 - bese ubuyela kuwo. Ngakho-ke, kuyoba nokulungiswa kwemibono ekuqaphelweni.
Izigaba zokugcina zokwakha imephu yengqondo
Isigaba sesine ukubuyela kumephu wengqondo. Kulesi sigaba, usebenzisa imibala, umbala ngokomzimba indalo yakho: ukhethe okubalulekile noma eyingozi kuwe, ujabule futhi ujabule. Azikho izidingo eziqinile ze-shades, ngakho sebenzisa okuthandayo. Dala izithombe ezicacile, ngoba bazosiza ukuvuselela umdwebo futhi kuzosiza ngekhanda.
Isigaba sesihlanu ukulungiswa okuphindaphindiwe kwekhadi. Iphinda ihlehlise ishidi isikhathi sezinsuku ezimbili kuya kwezinsuku ezingu-2. Ukubuyela futhi kudoti, ungenza ezinye izinguquko ezinengqondo. Manje imephu yengqondo isilungile!
Indlela eveziwe isemncane kakhulu, kodwa iphumelela kakhulu, futhi abantu abaningi sebevele bahlola izinzuzo zayo. Yenza nawe nawe!